Europe: Iibka Macmacaanka MARS oo la joojiyey kadib markii laga dhexhelay Balastik! - iftineducation.com
iftineducation.com – Shirkada Caanka ah ee soo saarta macmacaanka iyo Chocolate-ka ee MARS iyo Snickers ayaa sheegtay inay joojisay iibinta macmacaankaasi sida weyn loo cuno, kadib markii mid kamid ah Jakolaatadaasi laga dhex helay balastik wadanka Germany.
Shirkada MARS & Snickers oo fadhigeedu yahay Maraykanka ayaa sheegtay in khaladkan uu ka dhacay Warshada ay ku leeyihiin magaalada Veghel ee dalka Holland, taasi oo ku khasabtay in dhamaan jakolaatada MARS ee loo iibgeeyey suuqyada dalalka Yurub dib loo soo celiyo.
Macmacaankan ayaa la sheegay in dib looga soo celin doono goobaha loo iib geeyey oo gaaraya 55 wadan oo u badan dalalka Europe iyo waliba qeybo kamid ah Qaarada Aasiya.
Fadeexadan ayaa soo wajahday shirkada MARS kadib markii qof jakolaatadan gatay oo ku sugan dalka Germany uu ka dhexhelay balatik baaritaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday khaladkaasi inuu ka dhacay Warshada Mars ee ku taal koonfurta dalka Holland.
XARIIF YAXAAS SAAXIIB MOODEY -DAAWO QOSOLKAN